နိုင်ငံရေးသမားက ကိုယ့်အမှားကိုပဲ ကိုယ်ပြင်ရမှာ – Nyang Media
METM /လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမအိသဉ္ဇာမောင်
ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် (ပြည်သူ့လွှတ်တော်) တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင် မအိသဉ္ဇာမောင်ကို ငြမ်းမီဒီယာက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်။
ငြမ်းမီဒီယာ – လက်ရှိတာဝန်နဲ့ နိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုကို ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါခင်ဗျား။
METM – ကျမက အခုလက်ရှိမှာ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှာ ဗဟိုကော်မတီဝင်အဖြစ်တာဝန်ယူထားတယ်။ ပြီးတော့ လူ့ဘောင်သစ်လူငယ်မှာလည်း ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူထားတယ်။ ကျမက ကျောင်းသားသမဂ္ဂကလာတာပါ။ ကျမတို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှာ ချမှတ်ထားတဲ့မူ (၅) ချက်ရှိတယ်။ အဲဒီမူ (၅) ချက်ထဲကနေ ကျမအလုပ်လုပ်တယ်။ နောက်ပိုင်း ဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှုသပိတ်မှာပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျမတစ်နှစ်နဲ့တစ်လ ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတယ်။ အဲဒီကနေအမှုရုပ်ပြီး ပြန်ထွက်လာမှ ကျမအနေနဲ့နိုင်ငံရေးကို Professional ကျကျလုပ်ချင်လို့၊ လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီး လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီထဲကို ဝင်ခဲ့တာပါ။ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှာ လှုပ်ရှားနေတာ ဒီနေ့လက်ရှိအထိပါ။
ငြမ်းမီဒီယာ – နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲချင်တယ်၊ လူမှုစနစ်ကြီးထဲကရုန်းထွက်ချင်တယ်လို့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ မအိသဉ္ဇာမောင်ပြောထားတာကို သတိပြုမိပါတယ်။ အဲဒီအချက်ကို အကျယ်ရှင်းပြပေးနိုင်မလား။
METM – ဟုတ်ကဲ့ ပထမတစ်ချက်က ကျမတို့ဆီမှာ ဘယ်အရာမဆို အင်အားနဲ့ဆုံးဖြတ်ကြတဲ့ ပုံစံမျိုးရှိနေတယ်။ အင်အားမရှိတဲ့သူတွေက သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကို ဖြတ်သန်းရာမှာ အားငယ်ရမှုတွေရှိနေကြတယ်။ အရမ်းခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကို ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ ဆိုတော့ ကျမအနေနဲ့ ဒီမညီမျှတွေကို လျော့ချချင်တယ်။ ဒါကတစ်ချက်ပေါ့။
နောက်တစ်ချက်က ကျမတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်း လွှတ်တော်တွေက ခုထိ တစ်စုံတရာထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာပဲရှိနေသေးတယ်၊ နောက် နိုင်ငံရေးမှာဆိုရင်လည်း လက်နက်ရှိသူအချင်းချင်းပဲ စကားပြောကြတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတော့ ဒီစနစ် ဒီပုံစံတွေကနေ ရုန်းထွက်ပြောင်းလဲချင်တာကို ကျမပြောလိုတာပါ။
ငြမ်းမီဒီယာ – ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းထဲကနေ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားမှု ဆောင်ရွက်ရတာနဲ့ တကယ့်နိုင်ငံရေး နယ်ပယ်မှာ Professional နိုင်ငံရေးသမားအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရတဲ့ အခြေအနေနှစ်ခုရဲ့ ကွာခြားချက်က ဘာဖြစ်မလဲ။
METM – ကျောင်းသားဘဝနဲ့ကျတော့ . . . ကျောင်းသားသမဂ္ဂဆိုတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမှားခံနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်။ သူတို့ကလူငယ်လည်းဖြစ်တယ်၊ ကျောင်းသားတွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ သူတို့ကသမိုင်းမှာ အမှားခံနိုင်တယ်ပေါ့။ Professional နိုင်ငံရေးသမားဘဝမှာတော့ အမှားမခံတော့ဘူး။
ကျမတို့ရဲ့ မူဝါဒတွေ၊ ကျမတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊ ကျမတို့ရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေက တိတိကျကျရှိနေရတယ်လို့ ကျမမြင်တယ်။ ကျောင်းသားဘဝတုန်းကတော့ လူငယ်ဆိုတော့ တချို့ကိစ္စတွေမှာ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လုပ်လို့ရတယ်၊ နိုင်ငံရေးသမားဘဝမှာကျတော့ လူငယ်ဆိုပေမယ့်လည်း တချို့အရာတွေမှာ ပိုပြီးတော့ Policy ကျကျ၊ နည်းလမ်းကျကျ ဆောင်ရွက်ရတာပေါ့။
ငြမ်းမီဒီယာ – လာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်က ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ဘာကြောင့် ရွေးချယ်ဖြစ်တာလဲ။
METM – ကျမတို့ပါတီက ဒီရန်ကုန်မြို့ထဲမှာပြိုင်မှာက သင်္ဃန်းကျွန်းမှာပြိုင်မယ်၊ ဗိုလ်တထောင်မှာပြိုင်မယ်၊ ပန်းပဲတန်းမှာပြိုင်မယ်။ ဒီ (၃) နေရာပေါ့။ အဓိကကတော့ ပန်းဘဲတန်းဆိုရင်လည်း အဖိနှိပ်ခံလူတန်းစားတွေရှိတယ်။
ရန်ကုန်မြို့က ဘယ်လောက်ပဲ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်လို့ပြောပြော အဖိနှိပ်ခံလူတန်းစားတွေကတော့ နေရာအနှံ့မှာ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ အဲဒါတွေကြောင့် ကျမကရွေးချယ်လိုက်တာပါ။
ငြမ်းမီဒီယာ – အားလုံးအတွက်တန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုတွေလည်းရှိခဲ့တော့ အခုပန်းပဲတန်းမဲဆန္ဒနယ်ကိုရွေးချယ်တာမှာ လူနည်းစုအခွင့်အရေးတို့၊ အဖိနှိပ်ခံလူနည်းစုတွေအတွက်ရပ်တည်ဖို့တို့ အဲဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေများပါသေးလား။
METM – အခုကျမဝင်ပြိုင်မယ့် ပထမအချက်က No Equality = No Union ပေါ့။ နောက်ထပ်တစ်ချက်က Justice ပေါ့။ နောက်တစ်ခုကတော့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို လွှတ် တော်တွင်း လွှတ်တော်ပြင်ပ ဟန်ချက်ညီညီတွန်းနိုင်ရေး။ ဒီ (၃) ချက်အပေါ်မှာအခြေခံပြီး ကျမဝင်ပြိုင်တာပါ။ ကျမရဲ့ရွေးချယ်မှုကတော့ ဒီ (၃) ခုအပေါ်မှာအခြေခံပြီးရွေးချယ်လိုက် တာပါ။
ငြမ်းမီဒီယာ – ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကိုပေးနိုင်တဲ့ ကတိနဲ့ မျှော်လင့်ချက်က ဘာများဖြစ်မလဲ။
METM – ရှေ့မှာ အစိုးရနှစ်ဆက်ရှိသွားပြီ။ ဒါပေမယ့် လွှတ်တော်တွေက အသက်ဝင်မလာဘူးပေါ့နော်။ ကျမတို့ အားလုံး ကြည့်လိုက်ရင် လွှတ်တော်က သိပ်ပျင်းစရာကောင်းတယ်၊ ငြိမ်သက်နေတယ်ပေါ့။
အကယ်၍ ကျမသာရောက် သွားခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ အရင်ရှိလက်စနဲ့မတူတဲ့ အရာတစ် ခုကို ကျမတို့ဖန်တီးကြရလိမ့်မယ်လို့ ကျမယုံကြည်တယ်။
ရှေ့နှစ်ဆက်နဲ့ မတူတဲ့ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုမျိုးကို ကျမတို့ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ရှေ့နှစ်ဆက် (၁၀) နှစ်တာ ကာ လအတွင်းမှာ ကျမတို့ ဘာမှရေရေရာရာသိပ်မတွေ့ရဘူး။ လွှတ်တော်တွေက တအားငြိမ်သက်နေတယ်။ ကျမတို့ တစ်စုံတရာအားဖြည့်နိုင်တာပေါ့။
အဖိနှိပ်ခံတွေ၊ အလုပ်သမား လယ်သမားတွေကို ကိုယ်စားပြုသူတွေရောက်သွားခြင်းအားဖြင့် ရှေ့နှစ်ဆက်နဲ့မတူတဲ့ လွှတ်တော်ပုံစံမျိုးကို မြင်ရလိမ့်မယ်လို့တော့ ကျမအာမခံနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စအကျိုးဆက်က ကိုယ့်အတွက်သာမက တခြားလူတွေအတွက်ပါ အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်သွားမယ့်ဟာဆိုတော့ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ကျမတို့ ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အချိန်ကျလာပြီ။ The Times NOW.
ငြမ်းမီဒီယာ – အကယ်၍ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ချိန်မှာ မဲဆွယ်တုန်းက ပြည်သူကိုပေးခဲ့တဲ့ ကတိကဝတ်တွေကို ဘယ်လောက်ထိ အကောင်အထည်ဖော်နိုင် လိမ့်မယ်လို့ ထင်သလဲ။
METM – ဒီမေးခွန်းကတော့ ကျမ လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်တော့မှဖြေလိုက်တော့မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျမတို့ မဲဆွယ်ခွင့်မရသေးတဲ့အခါကျတော့ UEC ကထောက်ပြမှာစိုးလို့ပါ။
ငြမ်းမီဒီယာ – လွှတ်တော်ထဲရောက်ခဲ့ရင် ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်နဲ့ ပါတီရဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေကို ဘယ် လောက်ထိအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါသလဲ။
METM – အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့ ကျမတို့က ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအောက်က လှုပ်ရှားနေရတာဆိုတော့ တစ်စုံတရာ အားနည်းချက်တော့ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒီအခင်းအကျင်းအောက်မှာပဲ ကျမတို့လုပ်လို့ရတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
ကျမလူငယ်ဆိုတော့ လူငယ်နဲ့သက်ဆိုင်တာတစ် ခုကိုပဲ ဥပမာအနေနဲ့ပြောပြမယ်။ တိုင်းဒေသကြီး ဒါမှမဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်နဲ့ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်က အသက် (၂၅) နှစ်ပြည့်မှ ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံလို့ရတာလေ။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာ ကျမတို့က မဲပေးခွင့်ရသူတိုင်း ဝင်ရောက်ရွေးခံခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီး ကျမတို့ပြောင်းလဲလို့ရနိုင်တာပေါ့။ ဒါက ကြီးကြီးမားမား ညှိနှိုင်းရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ လွှတ်တော်မှာ မဲခွဲပြီးအများစုသဘောတူရင် ကျမတို့ပြင်လို့ရတယ်လေ။
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအောက်က ကျမတို့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရတာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအားဖြင့်တော့ အခက်အခဲရှိလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အလုံးစုံ လုပ်လို့မရဘူးလို့တော့ ကျမတို့ပြောလို့မရဘူး။ ခုနကပြောတဲ့ဥပမာလိုပဲ တကယ်လုပ်ချင်စိတ်ရှိရင် လုပ်လို့ရ နိုင်တာတွေလည်း အများကြီးပါပဲ။
တချို့ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျော့ချတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆို လုပ်လို့ရတယ်။ ငြိမ်းစုစီပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ ကိစ္စမျိုးကိုလည်း ဥပမာအနေနဲ့ပြောလို့ရတာပေါ့။ ဒါပေမယ့်တချို့ကိစ္စတွေမှာ ပြင်တာက ကောင်းအောင်ပြင်တာလား၊ ဆိုးအောင်ပြင်တာလားဆိုတာ ရှိသေးတယ်။
ငြိမ်းစုစီကိုပြန်ပြင်လိုက်တဲ့ကိစ္စဆိုရင် တချို့ပိုဆိုးသွားတဲ့ဟာတွေတောင် ရှိတယ်။ ဆိုတော့ ကျမပြောချင်တာက ကျမတို့အနေနဲ့ လွှတ်တော်မှာ တစ်စုံတရာလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့ အပိုင်းတွေ လည်းရှိပါတယ်။
No Vote ဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းက လူတွေကရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိတော့လို့၊ ပါတီအပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိတော့လို့၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေအပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိတော့လို့။ အဲဒီအတွက် …
ငြမ်းမီဒီယာ – တခြားနယ်ပယ်တွေထက် နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာ လူငယ်တွေကိုနေရာပေးမှုအားနည်းတဲ့ လက်တွေ့ အခြေအနေအပေါ်မှာ ဘယ်လိုသုံးသပ်မိပါသလဲ။
METM – အရွေ့တစ်ခုကိုရောက်အောင်တွန်းချင်ရင်တော့ ကျမတို့အနေနဲ့ လူကြီးရော၊ လူငယ်ရော၊ အလုပ်သမား ရော၊ လယ်သမားရော၊ လူလတ်တန်းစားတွေရော၊ အကုန်ဝိုင်းပြီးတွန်းမှရလိမ့်မယ်။ အလုပ်တစ်ခုပြီးမြောက်ဖို့ တွန်းကြတဲ့နေရာမှာ အားလုံးပါဝင်ဖို့လိုပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ လူငယ်တွေရဲ့ နိုင်ငံရေးခံယူချက်နဲ့ လူကြီးတွေရဲ့နိုင်ငံရေးခံယူချက် ကွဲလွဲကောင်း ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာဦးဝင်းတင်ပြောခဲ့သလိုပေါ့။ လမ်းချင်းတူရင်တော့ လူချင်းတွေ့ကြပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်လိုပဲနိုင်ငံရေးအယူအဆတွေကွဲလွဲ ကွဲလွဲ၊ တစ်ချိန်မှာ ကျမတို့က ဒီအရွေ့ကြီးကို စုပေါင်းပြီးတွန်းကြရမှာပဲ။ အဲဒီလို စုပေါင်းတွန်းကြတဲ့နေရာမှာ မျိုးဆက်သစ်တွေကိုမချန်ခဲ့ဘဲ လက်တွဲခေါ်ဖို့လိုတယ်။
ဒီမျိုးဆက်တွေနဲ့အတူ တူ တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျမတို့က တောက်လျောက်နိုင်ငံရေးခါးဆက်ပြတ်ခဲ့တာကိုး။ အခုလက်ရှိမှာဆိုရင် တချို့လူငယ်တွေက နိုင်ငံရေးကိုစိတ် မဝင်စားကြတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ ဒီလိုပဲ စိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေကို တွဲမခေါ်လို့ ကျန်ခဲ့တာတွေလည်း အများကြီးရှိတယ်။ ဆိုတော့ အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ လူကြီးရော လူငယ်ပါ ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ ပေါင်းပြီးတွန်းနိုင်မယ်ဆိုရင် အရွေ့ တစ်ခုကိုမြန်မြန်ရောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျမထင်တယ်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ လူကြီးတွေချည်းပဲလုပ်နေရင်လည်း ခါးဆက်ပြတ်သလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ လူငယ်တွေချည်းပဲလုပ်နေရင်လည်း အရွေ့တစ်ခုကိုတွန်းဖို့ တော်တော်ကြီးခက်လိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးဆိုတာကို အားလုံးဝိုင်းဝန်းလုပ်ကိုင်ကြရလိမ့်မယ်လို့ ကျမယူဆပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ဝင်ပြိုင်မယ့် မဲဆန္ဒနယ်က မဲဆန္ဒရှင်ပြည် သူတွေကို ဘယ်လိုသတင်းစကားပါးချင်ပါသလဲ။
METM – လက်ရှိမှာတော့ မဲဆွယ်ကာလမဟုတ်သေးတာကြောင့် ကျမအနေနဲ့ မဲဆွယ်စကားတော့ပြောလို့မရသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူတွေကကိုယ်ခံစားရတဲ့ကိစ္စကို ကိုယ်သိကြပါတယ်။ ကျမတို့ပြည်သူတွေက နိုင်ငံရေးသမားတွေလို ဖွဲ့နွဲ့ပြီးမပြောတတ်ပေမယ့် သူတို့ခံစားရတဲ့ကိစ္စကို သူတို့သိပါတယ်။
အဲဒီအတွက် အချိန်တစ်ခုကိုရောက်လာတော့မယ်။ (ဒါ ကျမမဲဆွယ်စကားပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ တော်ကြာ UEC နဲ့ ငြိနေမှာစိုးလို့။) လူထုက ကိုယ်ခံစားရတဲ့ကိစ္စ ကိုယ်သိတယ်။ အခုသူတို့ဆုံးဖြတ်ပေးရမယ့်အချိန်ကို ရောက်လာတော့မယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စအကျိုးဆက်က ကိုယ့်အတွက်သာမက တခြားလူတွေအတွက်ပါ အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်သွားမယ့်ဟာဆိုတော့ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ကျမတို့ ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အချိန်ကျလာပြီ။ The Time is NOW.
ငြမ်းမီဒီယာ – အခု ရွေးကောက်ပွဲနီးလာချိန်မှာကြားလာရတဲ့ No Vote ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပြုချင်ပါ သလဲ။
METM – ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုရှိရင်တော့ မဲပေးမှာပဲလေ။ ဒါ ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူး။ အခု လူထုက နိုင်ငံရေးကို တအားစိတ်ကုန်နေပြီ။
လူထုအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ကုန်တယ်ဆိုတာကလည်း ကျမတို့နိုင်ငံရေး သမားတွေ အသုံးမကျခဲ့လို့။ ကျမတို့နိုင်ငံရေးသမားတွေက မဖြစ်နိုင်တဲ့ကတိတွေကိုပေးပြီးတော့၊ မဖြစ်နိုင်တာတွေကို အိပ်မက်တွေပေးခဲ့ပြီး တကယ့်တကယ် အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ခဲ့ကြဘူး။
ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို လေ့လာစောင့်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒီအထဲမှာဖော်ပြထားတာက ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ၂၀၁၆ လောက်အထိမှာ လူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်၊ မျှော်မှန်းချက်အင်မတန်မြင့်နေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။
အဲဒီအချိန်က လူတွေကြားထဲမှာ မျှော်လင့်ချက်မြင့်တက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ ဆိုတော့ ကျမအနေနဲ့ သုံးသပ်မိတာက အဲဒီအချိန်က လူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်၊ မျှော်မှန်းချက်မြင့်တက်နေမှုကို ဆက်ပြီးသယ်ဆောင်လာနိုင်ခဲ့ရင်၊ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့နိုင်ရင် မဲပေးဖို့စိတ်ဝင်စားမှုနှုန်းက ဒီလောက်ထိကျလာမှာမဟုတ်ဘူး။ အခုတော့ မဲပေးဖို့စိတ်ဝင် စားတဲ့နှုန်းက ကျလာတယ်။
No Vote ဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းက လူတွေကရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိတော့လို့၊ ပါတီအပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိတော့လို့၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေအပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိတော့လို့။ အဲဒီအတွက်ပြင်ဆင်ရမှာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲပြင်ရမှာ။ သူများကိုသွားပြီးအပြစ်ပြောစရာမလိုဘူး။ ကျမကတော့ဒီလိုပဲထင်တယ်။
No Vote သည် သူတို့ရွေးချယ်မှု။ မဲပေးလာအောင်လုပ်ရမှာက ကိုယ့်တာဝန်လေ။ အဲဒီတော့ နိုင်ငံရေးသမားက ကိုယ့်အမှားကိုပဲ ကိုယ်ပြင်ရမှာလေ။ ပြည်သူတွေကိုသွားပြီး အပြစ်တင်နေစရာမလိုဘူးလို့ ကျမထင်ပါတယ်။
METM – မရှိပါဘူး။ ပြည့်စုံပါတယ်။
Tags: NoVote, နိုင်ငံရေး, ရွေးကောက်ပွဲ, လူထု, လူ့ဘောင်သစ်